WatchChat, yakanakisa WhatsApp app yeApple Watch yako [SWEEPSTAKES] | IPhone nhau
Isu tinoratidza izvo zvazviri pasina kupokana iyo yakanakisa WhatsApp kunyorera yeApple Watch, iyo mushure mekugadziriswa kwayo kwekupedzisira inoita kuti iyo mameseji app inyatsoshanda pane yako ruoko. Uye isu tinobira marezinesi mashanu ehupenyu, tinotsanangura maitiro ekuhwina imwe chete.
WatchChat yakagadziridzwa uye ikozvino inotipa mabasa matsva anoita kuti (dai yanga isati yatove) chishandiso chakanakisa kunakirwa WhatsApp kubva kuApple Watch yedu. With Anwendung ichi unogona kutumira mameseji, manotsi ezwi, ona zvese mifananidzo, mavhidhiyo, maGIF uye zvitambi ita kuti vakutumire uye vateerere kune manotsi ezwi avanokutumira, ese kubva kuApple Watch yako. Iyo zvakare inosanganisa akati wandei makirabhu mumitauro yakasiyana inowedzera kune yechinyakare keyboard yewatchOS nemabasa ekuzivikanwa kwenzwi uye kunyora kwemaoko kuitira kuti iwe ugone kusarudza nzira yaunoda kunyora meseji zvakanyanya.
Nguva dzekuregedza dzinoshamisika dzinobvumidza meseji ese aunenge uine mukushandisa kwe iPhone yako kurodha pakarepo, uye izvo zvinokupa mukana wekukurumidza kumeseji dzavanokutumira kuti unogona kushandisa yako Apple Watch pasina anonzwisisika mutsauko maererano nekushandisa pane iyo iPhone. WhatchChat inongokuratidza chete gumi dzekupedzisira dzaunadzo pane yako iPhone, asi kana iwe uchida kuwana chat isingaoneke, zviri nyore sekutsvaga wekubata kubva kunyorera chaiko uye iwe uchave unokwanisa kuona yavo mameseji uye pindura kwavari. Iko kushandira kwemahara, kunyangwe kuvhura mabasa ayo ese, sekuwana mukana wekutaurirana, uchafanirwa kutenga zvishoma mukati mekushandisa. Mugadziri wayo anozivawo nezve chishandiso neyakajairika inogadziridza iyo inovandudza uye nekuwedzera maficha.
Iwe unoda kuhwina imwe yemarezinesi mashanu ehupenyu hwatiri kukwikwidza kunakidzwa ne WhatchChat pasina zvirambidzo? Zvakanaka, iwe unofanirwa chete kunyorera kune yedu YouTube chiteshi uye nyora mhinduro pane ino vhidhiyo. Une Kusvikira Kukadzi 28, iro zuva ratichavhara iro dhizaini nekuzivisa vanokunda. Kana iwe uchida kudhawunirodha iyo application unogona kuzviita kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WatchChat, yakanakisa WhatsApp app yeApple Watch yako [SWEEPSTAKES]
Izvo zvakadaro hazvishande zvakazvimiririra nenhare, handiti?
Ngatione kana tiine rombo rakanaka! Ndatenda
Carlos Capcha akadaro
Yakanaka kwazvo App.
Pindura Carlos Capcha
Ini ndatoiisa paYouTube ndaiisa pano ini zvakare ndaikopa pasi masikati ano uye ndiri kuyedza uye inotaridzika chaizvo ... ndinovimba kuzoita rombo rakanaka uye kuwana imwe yeaya marezinesi ndatenda
Kana mumwe munhu ari kuchiyedza, rega vataure kana chichigona kushandiswa apo nharembozha yakaparadzaniswa nefoni.
Uye iro runyorwa pamwe nevakakunda?
Makwikwi aive paYouTube, saka, ivo vakundi vakatsikiswa paYouTube, hongu. Vanokunda vachaziviswa vachipindura zvavaitaura.
Ndozvandinotaura, Mhoro ???? Pane aripo ??? Vanokunda ??
Makwikwi aive paYouTube, saka, ivo vakundi vakatsikiswa paYouTube, hongu. Ndapindura kune vakunda mumashoko avo anoenderana vachiratidza kuti vakunda.
Belkin Soundform Unganidzo, inogona kuunza AirPlay 2 kune chero mutauri